Royal POLL: Prince Charles သည် NHS ဝန်ထမ်းများရှေ့တွင် COVID-19 စစ်ဆေးမှုခံယူသင့်ပါသလား။ မဲ
var brightcoveBrandsafety = '4 အားကစားနှင့်အထူးသတင်းသတင်း - ကြော်ငြာကိုပစ်မှတ်ထားခြင်းအတွက်အောင်မြင်ခဲ့သည်' မင်းသားချားလ်စ်သည်အင်္ဂါနေ့ညနေတွင်သူသည် COVID-19 နှင့်ပတ်သက်သောပျော့ပျောင်းသောရောဂါလက္ခဏာများပြသပြီးနောက် coronavirus အတွက်အကောင်းမြင်မှုကိုပြသခဲ့သည် ...
Inde: Kashmir Coronavirus news: Le Cachemire signale un premier décès dû à un coronavirus | India…
SRINAGAR: Un homme de 65 ans originaire du quartier Hyderpora de la ville est décédé jeudi, devenant le premier mort Jammu-et-Cachemire en raison de coronavirus. "Alors que nous partageons la triste nouvelle de notre premier décès #…
အိန္ဒိယ: နိုင်ငံသည် coronavirus ခြိမ်းခြောက်မှုကိုပိုမိုအလေးအနက်ထားသင့်သည် အိန္ဒိယသတင်း
နယူးဒေလီ။ ။ အစိုးရသည်ဆရာဝန်များနှင့်ကျန်းမာရေးလုပ်သားများအတွက်ပါတီခေါင်းဆောင်နှင့်အတူမတ်လ ၂ ရက်နေ့အထိပစ္စည်းကိရိယာကာကွယ်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကိုသတ်မှတ်ခြင်းမပြုရန်ပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်းအင်္ဂါနေ့ကကွန်ဂရက်မှစွပ်စွဲပြောကြားလိုက်သည်။
"ကျနော့်အမေကကျွန်မခင်ပွန်းနဲ့အတူကလေးရခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့အိမ်ထောင်ရေးကိုငါသွားရတော့မယ်" - ဆန်တီပလပ်စ်
Tele RELAY တစ်ခု6ပင်လယ်, 2020 0
သံသယအတုအယောင်မှသည်အခိုင်အမာအထိသစ္စာမဲ့မှုသည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ဘဝတွင်သိသိသာသာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ သစ္စာဖောက်မှုကိုနှစ်ဆတိုးပြီးနောက်ဆွေမျိုးနှစ် ဦး ကိုအတူတကွစုစည်းသောအခါအခွင့်အလမ်းကောင်းရှိပါသည်။
DÜ: Corona ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့မှုကြောင့်လုံခြုံရေးအခြေအနေများ…
We ည့်သည် - သောမတ်စ် Weegert သို့ PHK ချစ်ခင်ရပါသောကြည့်ရှုသူများ၊ "လုံခြုံရေးမူဝါဒအရကူးစက်ရောဂါနှင့်မီးခိုးမြူခြင်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်အတွက်အလားတူအကျိုးဆက်များရှိလိမ့်မည်!" ကျွန်ုပ် guest ည့်သည်နှင့်ဆွေးနွေးသည်။
George RR Martin က“ Game of Thrones” သည်မည်သို့အဆုံးသတ်သင့်ကြောင်း BGR ကိုပြောကြားခဲ့သည်
Game of Thrones သည်ပြီးခဲ့သည့်မေလကအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ပရိသတ်များကရုပ်မြင်သံကြားသမိုင်းတွင်အကြီးကျယ်ဆုံးပြသခဲ့သောနောက်ဆုံးရာသီကိုမည်သို့မည်ပုံကိုင်တွယ်ခဲ့သည်ကိုအပြည့်အ ၀ မဖော်ထုတ်နိုင်သေးပါ။ ထိုအ ...
Meghan Markle ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ခြင်း - Meghan သည် TOXIC တော်ဝင်ဘဝမှထွက်ပြေးရသည့်အကြောင်းရင်းမှာ…
var brightcoveBrandsafety = '4 ကြော်ငြာနှင့်ပစ်မှတ်ထားခြင်းအတွက်အားကစားနှင့်အထူးကုသတင်း - Meghan Markle နှင့်မင်းဟယ်ရီ။ သူတို့၏တော် ၀ င်လုပ်ငန်းများကိုရုပ်သိမ်းခြင်းကိုသတိပေးခြင်းမရှိပဲကြေငြာခဲ့သည်။
theကရာဇ်မင်းတည်မြဲဖို့အတွက်ဘုရင်မဟာဟယ်ရီနဲ့မီဂန် - လူတွေကိုလွှတ်ပေးရတယ်
နားလည်နိုင်သည်မှာ ၉၃ နှစ်ရှိချမ်းသာကြွယ်ဝသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်သူမချစ်သူ ၃၅ နှစ်အရွယ်မြေးဖြစ်သူသည်သူ၏အိမ်တစ်အိမ်တွင်မနေဘဲငွေကိုအားကိုးအားထားပြုရန်အချိန်တန်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတိပြုမိသည်။ သူ၏ ...